China Handro mpanamboatra fitaovana volamena microneedle sy mpamatsy | Adelic
Fitaovana microneedle volamena volamena Handro
Model Model: Handro
Laser karazana: Tsy misy laser
Style: Azo entina
Endri-javatra: Fanalana ny fery, fanesorana ketrona
Ny rafitra RF Fractional Microneedle dia teknolojia mety amin'ny fanavaozana ny hoditra sy ny fanamafisana ny hoditra amin'ny alàlan'ny fampiharana angovo RF mifehy tena mivantana ao anaty halalin'ny dermis miaraka amin'ny fanjaitra bitika kely manimba.
Ny fampifangaroana toy ny fanjaitra bitika kely miampy ny angovo RF dia mampihena ny fotoana fitsaboana sy ny fotoana fanarenana tena manavaka ny fitsaboana amin'ny laser miorina.
Fitsaboana tarehy: fanamafisana ny hoditra, fihenan'ny mason-koditra, fanalefahana ny hoditra, fanesorana ketrona, fiakarana tarehy; Fitsaboana amin'ny vatana: fanesorana ny fery, fanesorana ny marika, fanamafisana ny vatana.
Torohevitra: 1 * 10tip, 5 * 5tip, 8 * 8tip, tendrony tsy misy fanjaitra / 10pins, 25pins, 64pins
Ny haben'ny fitsaboana: 5 * 25mm, 13 * 13mm, 18 * 20mm, 16 * 18mm
Loha kristaly azo ariana: arotsaka aloha ny sira masira na alikaola alohan'ny hampiasana azy: Ho an'ny famonoana otrikaretina dia azo atsofoka ao anaty lovia kely ny famotopotorana. Ny masira na ny alikaola dia tsy mety ho avo noho ny probe. Alohan'ny hiasana dia tsy hisy rano sisa ao anaty fanadihadiana raha tahotra fa tafiditra ao anaty masinina izy io ary manimba ilay masinina (ny olana miseho amin'ny fampiasana faharoa dia tsy misy ifandraisany amin'ny orinasanay).
Ity milina Golden RF Microneedling manao ny fitsaboana amin'ny banga ity dia mahatonga ny faritra tsaboin'ny mpanjifa hahatsapa ho mahazo aina kokoa.
Ny halalin'ny fitsaboana dia azo ovaina malalaka amin'ny 0,5 ka hatramin'ny 3mm, mety amin'ny fitsaboana samihafa.
Gold RF microneedle misy fanjaitra 4 samy hafa ho an'ny tarehy, vatana, marika mihinjitra
Ny tendron'ny fanjaitra misy RF mba hahitana vokatra tsara kokoa.
Fanjaitra nopetahany takela-bolamena: mateza maharitra ary manana biocompatibility avo lenta amin'ny alàlan'ny fametahana takela-bolamena.
Ny marary miaraka amin'ny allergie metaly dia afaka mampiasa azy koa raha tsy mifandray amin'ny dermatitis.
Ny radiofrequency microcrystalline dia fomba iray hitsaboana ny olan'ny hoditra tsy mitovy amin'ny laser. Amin'ny alàlan'ny mikrokristalinina mihodina amin'ny hoditra, misy fantsom-pandefasana kely maro be eo anelanelan'ny hoditra, mba hahafahan'ny fitomboan'ny sela, ireo akora miasa ary ny otrikaina marobe hiditra ao anaty sosona lalina amin'ny hoditra amin'ny alàlan'ny fantsona kely, izay nahatratra ny vokatry ny fanamboarana mahomby, fampahavitrihana sela, ary fampiroboroboana ny fihodinan'ny hoditra sy ny fiparitahan'ny fibre elastika ketrona malemy ary manenjana ny hoditra.
Volan'ny herinaratra 100V na 200V, 50 / 60Hz
Hery lehibe 30W±10%
Angovo RF 1-4MHz±10%
mafy 10-30W (dingana 1)
Avereno matetika 1-10Hz
Haben'ny fanjaitra 0.3mm
Karazana fanjaitra 9 pins, 25pins, 64pins; Microcrystal
lalina 0.1-3.5mm (dingana 0.1)
Fotoana fitsaboana 50ms - 950ms
Hakitroky ny angovo 10-150mj / cm
Lanja afa-karatsaka 15kg
Teo aloha: Fitaovana Vana 4D HIFU
Manaraka: Masinina fanalana ny fanjaitra micro
Masinina laser 4 amin'ny 1 Multifunctional ND YAG
OEM style muti sehatra diode laser diode miasa
Fomba marindrano haingana fanesorana volo fitaovana f ...
Masinina fanalana ny fanjaitra micro
Adiresy: No.0804, tranobe A, Wei Lai Yu, Distrikan'i Chaoyang, Beijing.